प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरुविच वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न – Sajha Pati
काठमाडौं । आज काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली र विभागीय प्रमुखहरुविच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल र सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतको रोहवरमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नवौँ नगर सभाका विभिन्न बैठकहरुबाट स्वीकृत नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभागहरुले वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेका थिए । यसलाई एकरुपता दिन गठन गरिएको सहजीकरण समितिका अधिकारीहरुले कार्ययोजनाको दस्तावेजलाई अन्तिम स्वरुप दिएका थिए ।
विभाग, आयोजना तथा सचिवालयस्तरीय दस्तावेजमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले र सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । भौतिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फ १५२ वटा, सम्पदा संरक्षणतर्फ १६० सहित सबै विभागका कार्यक्रमहरुको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
साउन ३२ गते र भदौ १ गते महानगरले आयोजना गरेको वार्षिक कार्ययोजना तथा हस्ताक्षर कार्यक्रममा विभागीय प्रमुखहरुले आफ्ना विभागका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु समस्या र चुनौतीका विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास, सेवा प्रवाह र वित्तिय शुशासनका विषयहरु केन्द्रीत थिए ।
हस्ताक्षरपछि कर्मचारीहरुसँग आफूले गरेको अपेक्षाका बारेमा बोल्दै प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो, ‘हामीले नीति र कार्यक्रम बनाएका छौँ । त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ । अब कुनै पनि बहानामा योजना नरोक्नू । नीति तथा कार्यक्रममा अस्पष्ट भए सोध्नू तर आफूअनुकुलको व्याख्या नगर्नु । शंकाले होइन, विश्वाशले र गुनासो गरेर अपेक्षाले योजना कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो ।’
चालु आर्थिक बर्षदेखि चौमासिक प्रगतिलाई लिखित रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसैअनुसार काम गर्नुहोला । प्रमुख शाक्यको भनाइ थियो ।
त्यस क्रममा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, केन्द्र र वडाबाट हुने नियमित कामबाहेक देखिने, सुनिने र महसुस हुने काम गर्नु पर्ने बेलामा कर्मचारीतन्त्र सक्रिय र सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्पदाको संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, विपद व्यवस्थापनसहित सामुदायिक विकास कार्यक्रमबाट नागरिकसँग महानगरको सम्बन्ध आत्मीय बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । कर्मचारीको सोच राजनीतिक नेतृत्वको जस्तो हुनुहुँदैन । कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले, पदीय जिम्मेवारी र आदेश पालनाको सृङ्खलालाई कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा जोड्नु पर्ने बताउनुभयो ।
राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्थासहित ‘महानगरको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन’ जारी भइसकेको छ । त्यसैले जिम्मेवारपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नेले मनोबल उच्च बनाएर काम गर्नुहोला, ज्ञवालीको भनाइ थियो । बार्षिक कार्ययोजनाले कार्यक्रमहरुलाई आन्तरिकीकरणमा सहयोग गर्ने धारणा राख्दै सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले, वार्षिक कार्ययोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता र चौमासिक अवधिमा गरिने खर्चको अनुमान थप्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । प्राथमिकतामा परेका योजनालाई पनि कार्यान्वयनको क्रम निर्धारण गर्न सके मात्र परिणाम आउने बस्नेतको भनाइ थियो ।
कार्ययोजनाअनुसार नियमित कामहरु सबै चौमासिकमा हुनेछन् । मापदण्ड, कार्यविधि तयारी तथा अवधारणा तयार गर्ने कामलाई पहिलो चौमासिकमा राखिएको छ । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत महानगरवासी स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५८ हजार ८२३ लाभग्राहीको पहिचान गरिनेछ । गएको आ. व. को बक्यौता भुक्तानी गर्ने, चालु आर्थिक बर्ष सञ्चालन हुने योजनाहरुको स्पेसिफिकेसन¸लगत तयार र सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने काम पहिलो चौमासिकमा हुनेछ । बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा सम्झौताहरुमध्ये आन्तरिक रुपमा गरिने पहिलो चौमासिकमा र परामर्श सेवाबाट गरिनेलाई दोस्रो चौमासिकमा राखिएको छ ।
सामाजिक विकास विभागअन्तर्गत सूचना प्रकाशन गर्ने, संस्था छनौट गर्ने, अवधारणा तयार गर्ने, छलफल गर्ने काम पहिलो चौमासिकमा हुनेछ । खेलकुदका कार्यक्रम वडामा पठाउने निकासा, पौरखी मेला, स्वयमसेवक परिचालन दोस्रो चौमासिकमा हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास र तालिमका कार्यक्रम पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास र तालिम दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा हुनेछ ।
ककनी र धुनीबेँसी पालिकालाई दिइने विकास अनुदानका लागि पहिलो चौमासिकमा सम्झौता हुनेछ भने दोस्रो चौमासिकमा निकासा पठाइनेछ । पहिलो चौमासिकमा गुणस्तरका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्टको बर्गीकरण गरिनेछ । स्वास्थ्यतर्फ औषधी खरिद पहिलो चौमासिकमा हुनेछ भने स्वास्थ्य सेवाका नियमित काम सबै चौमासिकमा हुनेछन् । यससँगै नियमित हुने विभागका कामलाइ सबै चौमासिकमा राखिएको छ ।
महानगरको सेवालाई समुदायस्तरसम्म लैजान तथा प्राविधिक काम गर्न ५० जना ईन्टर्न र ५० जना स्वयंसेवक परिचालत गर्ने, १ ह्जार ४ सय जनालाई सहुलियतमा विद्युतीय चुल्हो दिने, १५ थान शव वाहन खरिद गर्ने, ब्रुमर चलाएर दैनिक ३५ क्युविक मिटर धूलो संकलन गर्ने कार्यक्रम छन् ।
सहरी सुन्दरता र विकास व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने क्रेन फिटेड ट्रक २ थान, बकेट फिटेड ट्रक २ थान, चेन डोजर १ थान खरिद गरिनेछ भने अग्नि नियन्त्रणका लागि ३ वटा दमकल खरिद गरिनेछ । करीव १५ हजार मिसिल डिजिटाईजेसन गरिनेछ । यस्तै कम्तीमा २० वटा स्थानीय कानुन तर्जुमा गरिनेछ । काठमाडौ विजनेस हवअन्तर्गत करिव १० वटा उद्यमी समूह छनौट हुनेछन् । कम्तीमा ५० वटा उद्योगी व्यवसायीको सहभागितामा पौरखी मेला आयोजना हुनेछ ।
विधागत पुरस्कार वितरणसहित यसबर्ष १६० जना जनप्रतिनिधिहरुलाई क्षमता विकास तालिम दिने, ७५ जना कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम र ३५० जना कर्मचारीलाई विषयगत तालिम दिने कार्यक्रम छ । प्रत्येक वडामा १ वटाको दरले ३२ वटा फुटसल प्रतियोगिता गरिनेछ । ३ वटा नमूना सहकारी छनौट गरिनेछ ।
नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक र विद्यालयका शिक्षकहरु गरी १ हजार ४ सय लाई तालिम दिइनेछ भने थप ५ वटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा लागू गरिनेछ । ३५ हजार विद्यार्थीका हातमा नेपालभाषाको पुस्तक पु¥याइनेछ । विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान विभिन्न विद्यालयहरुलाई ५० थान ल्यापटप दिइनेछ । शिक्षातर्फ उत्कृष्ट ६ वटा विद्यालय र १२ जना प्रधानअध्यापक तथा शिक्षकहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
यसै बर्ष १८ वटा वडामा सामुदायिक सिकाई केन्द्र स्थापना गरिनेछ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोट जिल्लाको सिसडोल ल्याण्डफिल साइटबाट प्रभावित क्षेत्रका ६ हजार ४९५ घर परिवारको स्वास्थ्य वीमा गरिनेछ । सहरी स्वास्थ्यअन्तर्गत प्रत्येक वडामा हप्ताको २ पटक हुने स्वास्थ्य परीक्षणबाट १ लाख २० हजार महानगरवासीले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । १२ सय वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन दर्ता तथा नविकरण गरिनेछ । करीव २०० जना वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलोमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । मनमोहन अधिकारी ज्येष्ठ नागरिक खोप कार्यक्रमअन्तर्गत ९ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइनेछ ।